इलाममा यस्तो अचम्म ! पुरिएको चिहान खनेर गहना चोरी !
ARCHIVE, INVESTIGATION » इलाममा यस्तो अचम्म ! पुरिएको चिहान खनेर गहना चोरी !
इलाम - लिम्बू परम्परामा मानिसको मृत्यु भएपछि शवसँगै उसले लगाएका गरगहना र प्रयोग गरेका सामग्री चिहानमा पुर्ने प्रचलन छ । यहि चलनको फाइदा उठाउँदै इलाममा लासहरुको गहना चोर्ने क्रम बढेको छ । यस्तै चोरीको घटना इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका–४ नामसालिङमा समेत घटेको छ । माटोमा गाडिएको शव खनेर सुनका गहना चोरी भएको पाइएको छ । चिहानमा शवसँगै गाडिएको चार आनाको मङ्गलसूत्र चोरी भएको बताइएको छ ।
घटना केहि दिन अघिको हो । नामसालिङकी ३० वर्षीया सुनिता लिम्बूको टाइफाइडका कारण उपचारका लागि झापातर्फ लैजाँदै गर्दा बुधबार बाटैमा मृत्यु भएको थियो । बिहीबार लिम्बू परम्पराअनुसार घरनजिकै माटोमा पुरिएको उनको शव चौबीस घण्टा नबित्दै चिहान खनेर शुक्रबार राति मङ्गलसूत्र चोरी भएको स्थानीय बासिन्दा भुवन लिम्बूले जानकारी दिएका छन् ।
'चिहानमा धेरै गरगहना पुरिएको आशङ्कामा शव खनेको देखियो' उनले भने 'कानमा लगाएको केही सुन छाडेर चोरले अन्य गहना पनि चोरी गरेर शव पुनः गाडेको भेटियो ।'